NJENGE BHANYABHANYA YEBACHELORETTE EDUMILEYO, UCLARE CRAWLEY UKUBA ABEKWE YEDWA NGAMADODA ANGAMA-42 - IZINTO EZIKHETHEKILEYO ZE-GS
Kubo bonke abalandeli kuthotho oluchukumisayo iBachelorette, ekugqibeleni sinesiqwenga seendaba ezilungileyo kubo bonke
Kubo bonke abalandeli bethotho leengoma IBachelorette , ekugqibeleni sinesiqwenga seendaba ezimnandi kuni nonke enilinde ngolangazelelo icandelo elilandelayo lomboniso. Abalandeli babuhlungu xa i-Bachelorette iphela kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Kwaye ukusukela ngoko, asikabinalo ulwazi malunga ne-Bachelorette, nangona yayintle kakhulu emoyeni, kwakungekho siqinisekiso kubenzi.
Nangona kunjalo, imithombo ngoku iqinisekisile ukuba iBachelorette isetelwe ukwenza ifilimu elinye ixesha lonyaka kunye noClare Crawley kungekudala !!
UClare Crawley Ukuvalela yedwa nabaKhuphiswano
Ukufota kwi-Bachelorette bekuza kuqala ngoMatshi kulo nyaka. Kodwa emva koko ukufota kwathengwa kwi-hiatus yindlu yokuvelisa ngenxa yesifo se-coronavirus. UWarner Bros, iQela likamabonakude, lazise ababukeli babo ukuba bathathe isigqibo sokuyibamba imveliso ukuqinisekisa ukhuseleko nentlalo-ntle yomntu wonke.
Nangona kunjalo, nge-26 kaJuni, imithombo yaveza iindaba zokuba uClare Crawley kunye nabangeneleli kufuneka baqale ukufota kungekudala. Bonke babehlala kunye kwindawo etyebileyo neyabucala eSouthern California.
Abagqatswa sele begqityiwe ngemveliso. UClare Crawley kunye nabo bonke abagqatswa baya kungena bodwa kwindawo yokubhenela ngelixa bonke bezama ukuphumelela intliziyo yakhe!
UClare Crawley unyuse inani lamadoda aKhuphisana ngentliziyo yakhe kwiBachelorette
Ngokwengxelo , UClare waqala uluhlu lwabangeneleli kunye namadoda angama-32 ekuqaleni, kumdlalo. Kodwa ngoku amanani anyukile aya kuma-42. Kwitotali iyonke, angama-25 amagama avela kubagqatswa ababekhethwe ngaphambili, kwaye uClare wongeze abantu abatsha abali-17 kuluhlu. Ngaphandle koko, uninzi lwabadlali abavela kuluhlu lwangaphambili bebengafumaneki ukuba badubule ngeli xesha.
UClare uzinike iindidi zamadoda anokukhetha kuzo. Amadoda afaka ukhuphiswano avela kuwo onke amaqela ubudala. Abanye babo baneminyaka engama-30 kwaye abanye baneminyaka engama-40. Ukugcina engqondweni ukuba uClare uneminyaka engama-39 ubudala, umboniso unabantu abakwiminyaka yakhe yobudala. Kodwa siqinisekile ukuba amanye amadoda akwi-20 yawo angathanda ukuyidubula! Kutshanje, uChris Harrison, kudliwanondlebe, uthethe ngexesha elizayo kwaye wongeze kulindelo lwethu kunye nemincili malunga nomboniso.
Ngeli xesha lobhubhane wehlabathi apho uninzi lweemiboniso lumi, iindaba malunga nokubuya kweBachelorette zidale uhlobo olwahlukileyo lwamandla kunye nolonwabo phakathi kwabalandeli.
Ewe, sinqwenela abo bakhuphisana konke okuhle!
Ixesha langaphandle le-6 yomhla wokukhutshwa ngo-2021
nini mindhunter isizini 2 izophuma
Eyona mibhalo iphambili yokubulala kwi-youtube
Umqolo wecarnival ixesha lomoya 2 umhla
ixesha lokudibana kosapho 4